Wasiiru-Dowle ka tirsan Koonfur Galbeed iyo saraakiil kale oo qarax lagu dilay. – Bogga Calamada.com
Wasiiru-Dowle ka tirsan Koonfur Galbeed iyo saraakiil kale oo qarax lagu dilay.
C/qaadir C/raxmaan (Baraf) oo ahaa wasiiru dowlihii Amniga kooxda ridada Koonfur galbeed iyo Xildhibaan ka tirsan Hirshabelle iyo labo kale ayaa ku dhintay qarax maanta gallinkii dambe Mujaahidiinta Alshabaab kula beegsadeen duleedka Wallawayn ee Shabeelaha Hoose.
C/qaadir Baraf iyo saraakiisha kale ee la dilay ayaa ka mid ahaa koox wasiiro ah oo maanta garoonka Balli-doogle kusoo dhawaynayay Shariif Sakiin, waxaanu isku dayay in Muqdisho uu ku tago safar dhinaca dhulka ah, markii ay mareen inta u dhaxaysa Wallawayn iyo Afgooye ayaa mar kaliya baabuurkoodii uu qarax la tagay, halkaasi oo ay dhammaantood ku qurbaxeen.
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in wasiirka la dilay iyo xildhibaanka la socday labaduba ay ahaayeen raggii ka dambeeyay afduubkii lagula kacay caruurtii dhiganaysay mac’hadka u furnaa Beesha Gaaljecel, caruurtaasi oo intii la dilay maahee intii kalena loo geeyay gaalada ku sugan Xalane, maanta ayaana looga aarguday raggaasi dambigii ay kula kaceen caruurta diinta baranaysay.